January 21, 2022 – ဝင်းမေတ္တာ
မုဒြာ အကြောင်းရာ သိကောင်းစရာ
မုဒြာဟူသော ဝေါဟာရသည် သက္ကတဘာသာအားဖြင့် မုဒြာ၊ ပါဠိဘာသာအားဖြင့် မုဒ္ဒဖြစ်သည်။ မြန်မာဘာသာအရ လက်အနေအထား ပုံစံကို ခေါ်ဆိုသည်။ အချို့ ရုပ်ပွားဆင်းတုဆိုင်ရာ ပဋိမာသိပ္ပံပါရဂူကြီးများက မုဒြာဟူ၍လည်းကောင်း၊ ဟတ္ထဟူ၍လည်းကောင်း ခွဲခြားခေါ်ဝေါ်ပညတ်ကြလေသည်။ အလွန်နက်နဲသိမ်မွေ့၍ အတွင်းငုပ်သော အနက်အဓိပ္ပာယ် သဘောတရားများကို ရည်ညွှန်းခြင်း ဖြစ်သည်။ အချို့မုဒြာမှာ လက်တစ်ဘက်တည်းဖြင့်သာ ဟန်အမူအရာ ပြခြင်းဖြစ်၍၊ အချို့မုဒြာမှာမူ လက်နှစ်ဘက်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ လက်လေးငါးဆယ်ဘက်ဖြင့်ဖြစ်စေ ဟောကြားညွှန်ပြလိုသော သဘောတရားကို ဟန်အမူအရာ ပြထားခြင်းမျိုး ဖြစ်လေသည်။ မြန်မာ့ရိုးရာ ပဋိမာသိပ္ပံပညာ သမိုင်းအကျဉ်းချုပ် မြန်မာပြည်ရှိ ရုပ်လုံး ရုပ်ကြွ ရုပ်ပွါးဆင်းတုများနှင့်တကူ ဆေးရေးပန်းချီကားများမှ လူ့ ရုပ်ပုံ များတွင် ဗုဒ္ဓသာသနာရေးဆိုင်ရာများသ က ဟိန္ဒူဗြာဟ္မဏဘာသာနှင့် အခြားထင်ရှား မသိသာ နိုင်သေးသော ဘာသာဝါဒ အယူအဆ နှီးနွယ်သည့် ဟန်ပန်အနေအထားများကို …
မုဒြာ အကြောင်းရာ သိကောင်းစရာ Read More »
ညနေ (၂၂၉) – မောဟစရိုက်ရှိသူတို့အတွက်ကျင့်နည်း အပိုင်း(၁)
ထေရဝါဒ ဓမ္မကမ္မဌာန်း လမ်းစဥ် အပိုင်း(၂၂၉) မဟာသမယသုတ်များ မောဟစရိုက်ရှိသူတို့အတွက်ကျင့်နည်း အပိုင်း(၁) (မဟာဗျူဟသုတ် ၊ သုတ္တနိပါတ်၊ ၄၁၈) အမေးအဖြေ ကဏ္ဍ ဘယ်အရာဖြင့် လောကကို ချိတ်ဆွဲအပ်ပါသလဲ? ဘယ်အရာသည် လောကကို ခြံရံအပ်ပါသလဲ? ဘယ်အရာသည် လောကကို ပိတ်ဆို့အပ်ပါသလဲ? ဘယ်အရာ၌ လောကသည် တည်ပါသလဲ? နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာနန္ဒဆရာတော် ဦးဃောသိတာဘိဝံသ (မေတ္တာနန္ဒဝိဟာရ, Califorina, U.S.A.) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။ မဟာသမယသုတ်များ သင်တန်းနှင့် မှတ်စု
နံနက် (၁၈၄) – ကံတရား၏ ပဲ့ကိုင်ရှင်
တရားလက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်း (၁၈၄) နံနက် သီလခံယူ, ဘုရားဝတ်ပြု, အလုပ်ပေးတရား စိတ်ဓာတ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အပိုင်း (၇) ကံအကျိုးပေး ထူးခြားဆန်းကြယ်ခြင်း ကံတရား၏ ပဲ့ကိုင်ရှင် နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာနန္ဒဆရာတော် ဦးဃောသိတာဘိဝံသ (မေတ္တာနန္ဒဝိဟာရ, Califorina, U.S.A.) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။ စိတ်ဓာတ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး သင်တန်းနှင့် မှတ်စု